शैक्षिक सुशासन कमजोर भएकै हो | Educationpati.com
शैक्षिक सुशासन कमजोर भएकै हो
२०७२ माघ १२ गते २१:३९मा प्रकाशित
शैक्षिक सुशासन भनेको के हो ?
शिक्षा क्षेत्रमा राखेको लक्ष्य र उदेश्य हासील गर्नका लागि सवैले आ आफ्नो तह र क्षेत्रबाट जिम्मेवारी सहज रुपमा निर्वाह गरेर उपलव्धि वा लक्ष्य हासील गर्ने अवस्था हो । सवैले शैक्षिक सेवा प्रवाह सहज ढंगबाट प्राप्त गरेको सहज ढंगबाट प्रवाह गरेको त्यसको मिश्रण भएको अवस्था नै शैक्षिक सुशासन हो । बालबालिकाले सहज वातावरणमा पढ्न पाउने, पठनपाठन गर्ने, गराउने व्यक्ति, निकायहरुले सहज ढंगमा सेवा उपलव्ध गराउने÷ गराउन पाउने उपउक्त वातावरण , सवै कुराहरु व्यवस्थापकिय ढंगबाट प्रभावकारी भएको अवस्था हो ।
शैक्षिक सुशासनको अवस्था कस्तो छ ?
वर्तमान अवस्थामा सेवाग्राहीहरु आमरुपमा सन्तुष्ट भएको अवस्था छैन् । केहि गुनासा र अपर्याप्तताका कुराहरु आइरहेको अवस्था छ । सुशासन कत्ति पनि छैन केहिपनि छैन भन्दा पनि हुनपर्ने जति नभएको अवस्था हो । राजनीतिक परिवर्तन सँगै शिक्षामा पनि व्यापक परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको अवस्था छ ।अपेक्षाकृत गतिमा सुधार हुन नसकेको मात्रै हो ।
शैक्षिक सुशासन नहुनका कारण के हो ?
यसका दूइ तिन वटा कारण हुन सक्छ । हाम्रो गभर्नेन्सको पाटो कमजोर छ । जसले हाम्रो शैक्षिक कार्यक्रम जुन ढंगमा अधि बढ्नपर्नेहो त्यसो हुन सकेको छैन् । सवैले जिम्मेवारी वहन गर्ने र त्यसप्रति अवनत्व स्वकिार गर्ने पाटो कमजोर देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा नीतिगत सवालहरुले अलमल्याएको देखिन्छ । नयाँ काम गरेर नयाँ गति दिने अभ्यास नगरेको पनि होइन् । विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना ९एसएसआपी० आएर सकिने वेला सम्म पनि यो अनुसार कानुन संशोधन हुन सकेन् । ऐन संशोधन गर्न नसक्नेले के शैक्षिक सुधार गर्नुहुन्छ । के कार्यक्रम ल्याउनुहुन्छ भनेर हामीमाथि यक्ष प्रश्न आउने गर्दछ । नीति तथा कार्यक्रमहरु नबनेका पनि होइनन् प्रसस्त बनेका छन् । राम्रा पनि छन् । कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रह्यो । त्यसलाई आत्मसात् नगरेको देखिन्छ । शिक्षाका कर्मचारीहरु जिम्मेवार ढंगबाट बढ्न नसकेको एकातिर देखिन्छ भने विद्यालयका शिक्षक, अभिभावकहरु प्नि जिम्मेवार नभएको देखिन्छ । यि सवै दण्डविहीनताको अवस्था आउनुमा राजनीतिक अस्थीरता पनि जिम्मेवार छ ।
शैक्षिक सुशासनका लागि के प्रयास हुदैछ ?
नेपाल सरकारले आउदो वर्ष देखि विद्यालय क्षेत्र विकास योजना ९एसएसडिपी० कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछ । यसले शैक्षिक सुशासन सुधारका लागि उल्लेख्य काम गर्नेछ । नयाँ संविधानले जारी गरेको मौलिक हक, राज्यको निर्देशित सिद्धान्तअनुसारको शैक्षिक सुधार गर्ने प्रस्थानविन्दुमा हामी छौँ ।